Vaovao - Ny antony manapa-kevitra izay misy fiatraikany amin'ny vidin'ny fanamafisam-peo amin'ny finday
Ny antony manapa-kevitra misy fiatraikany amin'ny vidin'ny finday famantarana jammer
Nandritra ireo tetik'asa niaro ny signal teo aloha, ny ampahany izay maneho ny lanja indrindra dia ny tinaky ny mpanjifa, izany hoe, ny singa tena mamaritra ny vidiny dia ny fangatahan'ny mpanjifa. Ohatra, amin'ny faritra anaty 50m * 50m, ny vidin'ny tobim-piantsonana tsy ampiasaina eo akaiky eo dia ambany kokoa noho ny tobin'ny tobim-panorenana; ny vidin'ny efitrano malalaka raha tsy misy fialofana dia ho ambany noho ny fialofana; Ny fiarovan-tena feno bandy tsy misy tapaka 24 ora dia ho mora vidy kokoa noho ny miserana kely Ny vidin'ny fiadiana amin'ny tarika matetika dia ambany; ny vidin'ny fiarovan-tratra fitsapana (ny afovoan-tanàna ihany) dia ambany noho ny an'ny miaro tena; etc.
Ao amin'ny tetikasa, araky ny filan'ny mpanjifa, ny firafitry ny tranokala sy ny tanjaky ny onjam-peo, ny rafitra miaro dia matetika miorina amin'ny endrika ampinga fampielezana host + antenna. Teknolojia azo antoka sy matihanina kokoa ity eo amin'ny sehatry ny fiarovana. Ny fomba fiarovana dia aleon'ny sampam-piarovana azo itokisana kokoa noho ny fitaovana tokana, ary miovaova ny vidiny arakaraka ny haben'ny faritra ampinga sy ny tontolo iainana eo an-toerana.
Ao amin'ny fianakaviana dia manahy ny ray aman-dreny sasany sao ho andevozin'ny tambajotran-telefaona ny zanany ary hihevitra ny hividy jammers, ary matetika izy ireo dia mividy miafina mpangarom-peo ho an'arivony dolara. Ireo fitaovana ireo dia hanelingelina mivantana ny fampiasana telefaona finday eo amin'ny manodidina. Ireo mpandraharaha lehibe telo dia hanao fanadihadiana aorian'ny nahazoana ny fitoriana. Raha hita izy ireo dia mety iharan'ny sazy tsy ara-dalàna.
Noho izany, ny filàna manapa-kevitra amin'ny vidin'ny jammers famantarana finday dia ny fangatahan'ny mpampiasa. Avo ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ary avo ny vidiny, ary hihena ny vidiny ambany. Na izany aza, ny fikasana voalohany hiaro dia ny hahatratra ny vokany nefa tsy hisy fiatraikany amin'ny antoko fahatelo, noho izany ny ampinga tonga lafatra kokoa dia tsy ho mora vidy loatra. Ny lalàn'ny sanda no mibaiko